कस्तो अवस्थामा पीसीआर गर्ने, पीसीआर नगरे हुँदैन र?: डा. रवीन्द्र पाण्डे – Nepal Parikrama
कस्तो अवस्थामा पीसीआर गर्ने, पीसीआर नगरे हुँदैन र?: डा. रवीन्द्र पाण्डे
कोभिडबारे २० जिज्ञासा र जवाफ – डा. रवीन्द्र पाण्डे
१. कस्तो अवस्थामा पीसीआर गर्ने ? पीसीआर नगरे हुँदैन र ?
– ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो, पखाला, बान्ता, थकान, छालामा बिमिरा आदिमध्ये केहि लक्षण मिलेमा, संक्रमितसंग भेट भएको अवस्थामा तथा कतै यात्रा गरेको अवस्थामा परीक्षण गर्नुपर्दछ। समयमै पिसिअर गरेमा रोग पत्ता लाग्छ । आफु आइसोलेसनमा बसेमा परिवारलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ । रोग पत्ता लागेपछि गाह्रो भएमा कहाँ / के उपचार गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। तसर्थ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्दछ।
– यसपटक पीसीआर बाहेक छातीको एक्सरे गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोभिड निमोनिया देखिएमा तदनुसारको उपचार गर्दा गम्भीर अवस्था आउनबाट बचिन्छ ।
– भिटामिन सी, डी र जिंक लाभदायक छन्। तर यी औषधिले कोरोना ठिक गर्दैनन् ।
– एन्टिबायोटिकले कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्दैन । निमोनिया भएर ब्याक्टेरियल संक्रमण भएमा मात्र उपयोगी हुन्छ । तसर्थ जथाभावी औषधि सेवन गर्नुहुँदैन।
– गर्दैन। सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने चीन, भारत, मदागास्कर, श्रीलंका आदि देशमा भएका अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् ।
– यसपटकको दोस्रो लहर धेरै संक्रामक भएपनि मृत्युदर कम छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेमा संक्रमण हुँदैन। संक्रमण भएमा स्वस्थ आहार, बिहार र उपचारले खतराको अवस्था हुँदैन ।
– हुँदैन ! फोक्सोमा संक्रमण / निमोनिया / पानी जम्ने आदि भएमा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । रोगको उपचारसंगै अक्सिजन लिंदा फाइदा गर्छ । अक्सिजन आफैले रोग निको गर्दैन । फोक्सोको अवस्था अनुसार अक्सिजनको मात्रा निर्धारण हुन्छ। तसर्थ अस्पताल भर्ना भएर वा निको भएर घरमा फर्के पछि सास फेर्न गाह्रो भए चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अक्सिजन लिनुपर्दछ ।
– लकडाउन भनेको जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने हो । नयाँ महामारी आएमा, महामारीको कारण अस्पताल भरिएमा, नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा तथा सरकारले तयारी गर्नको लागि लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन जति कडा भयो, संक्रमणको चेन त्यति छिटो तोड्न सकिन्छ । यसको लागि नागरिकले मापदण्ड पालना गर्ने तथा सरकारले पालना गराउनेतर्फ पुरै शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसो भएमा ३ हप्ताको लकडाउन पर्याप्त हुन्छ । लकडाउनको अबधिमा सरकारले दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने व्यक्तिलाई राहतको ब्यबस्था गर्नुपर्दछ । अनुशाशित नागरिक र जिम्मेवार सरकारको संयोगले लकडाउन छोंटो गर्न सकिन्छ।
– दोस्रो लहर अझै २ – ३ महिना रहन्छ | त्यसपछि घट्दै जान्छ । महामारीबाट मुक्त हुनको लागि ७० % नागरिकले खोप लगाउनुपर्दछ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर भाइरसलाई मान्छेबाट अलग्याउनु पर्दछ ।
साभार: डा. रबीन्द्र पाण्डे/फेसबुकवाल
Published On: १९ बैशाख २०७८, आईतवार १२:०६ 1056पटक हेरिएको
देशभर ८ हजार २०३ संक्रमित थपिए, १९६ जनाको मृत्यु